भारत राजदूत के का लागि भेट्नुभयो उपराष्ट्रपति पुनलाई ? | सहारा टाइम्स
Home » Politics » भारत राजदूत के का लागि भेट्नुभयो उपराष्ट्रपति पुनलाई ?
भारत राजदूत के का लागि भेट्नुभयो उपराष्ट्रपति पुनलाई ?
काठमाडौं, माघ २ गते । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ सँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंहले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
आज अपरान्ह उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, बहादुरभवन कान्तिपथमा उपराष्ट्रपतिसँग भारतीय राजदूत सिंहले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो ।
भारतीय राजदूतसँगको भेटमा उपराष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि नेपाल राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले अब नेपाल आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
उपराष्ट्रपतिले युगांैदेखिको नेपाल भारत सम्बन्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक हुँदै जनस्तरसम्म प्रगाढ रहेको बताउनुभयो । उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उपराष्ट्रपतिले आउँदै गरेको भारतको ७० औं स्वतन्त्रताको दिवसको अवसरमा राजदूतमार्फत भारतीय राष्ट्रपति, समकक्षी, प्रधानमन्त्री, राजनेताहरु र आम भारतीय जनतामा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
उपराष्ट्रपतिसँगको भेटमा भारतीय राजदूत सिंहले अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न भारत आतुररहेको बताउनुभयो । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली जनताबाट व्यक्त मत नेपाली जनताको सार्वभौम निर्णय भएकोले भारत त्यसलाई स्वगत र सम्मान गर्ने बताउनुहुँदै राजदूत सिंहले निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ् गरेको बताउनुभयो ।
भेटमा राजदूत सिंहले भारत र नेपालको सम्बन्ध राजनीतिक भौगोलिक सिमानाको सम्बन्धमात्रै सिमित नरही जनस्तरसम्म जरा गाडेको बताउनुभयो । उहाँले प्रविधि, पूर्वाधार, जलविद्युत, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य गर्न भारत सदैव तयार रहेको बताउनुभयो ।